प्रकाशित : बिहिबार, जेठ ३०, २०७६१३:११
फिल्म । पछिल्लो समय नेपालमा फिल्मकर्मीलाई बढी मात्रामा पटकथामा आरोप लाग्ने गरेको छ । पटकथा कम्जोर भएकै कारण राम्रो फिल्म बन्न नसकेको आरोप नौलो होइन । पछिल्लो समय नेपाली फिल्मले प्रविधिमा फड्को मारेता पनि अधिकांस फिल्म पटकथामा चुकेका छन् । यसैलाई मध्नजर गर्दै बलिउड , हलिउड वा चाइनिज फिल्मका लेखक ल्याएर वर्कशप गराउने तयारीमा नेपाल चलचित्र तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठान रहेको छ ।
यही अगस्टको २१ देखि २७ सम्म स्क्रिन राइटिङ वर्कसप (पटकथा लेखन कार्यशाला) पनि सञ्चालन गर्ने राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गराइयो । मकवानपुरको इन्द्रसरोबर, कुन्साल वा चित्लाङ मध्ये कुनै एक ठाउँमा हुने कार्यशाला हुने कार्यक्रम संयोजक केपी पाठकले बताए । ‘कार्यशालामा ६० जना सम्म सहभागी गराउने योजनामा रहेका छौ र हामी आवेदनपछी सहभागी फाइनल गर्छौ’ संयोजक पाठक भन्छन् ‘अनुभवी फिल्म लेखकहरुबाट प्रशिक्ष दिईनेछ भने यो आवश्यकता देखेर नै आयोजना गर्न लागेका हौ ।’
नेपालबाट फिल्म अनुसन्धानकर्ता सम्पदा मल्ल सहजकर्ताका रुपमा रहेकी छिन् भने सहभागिताका लागि नेपालीले १० हजार रुपैंया र विदेशीले १ सय ५० डलर शुल्क तिर्नु पर्नेछ । ‘लेखक प्राय अगाडी आउंदैनन् तर उनीहरुको इफोर्ट सफलतामा कसै भन्दा कम हुँदैन त्यसैले यसलाई सुधार्दै अगाडी बढाउनु पर्छ’ सम्पदा भन्छिन् ‘हामी अपडेट हुनु जरुरि छ जस्तो लाग्छ ।’
एक हप्तासम्म कार्यशालामा सहभागी हुनेहरु हरकेले एउटा एउटा कथा लेख्नु प्रावधान आयोजकले राखेको छ । सो कथामा कार्यशाला समापन भएको दुई हप्ताभित्र सवैले पूर्ण स्क्रिप्ट बुझाउनुपर्नेछ र सो स्क्रिप्ट मध्येबाट उत्कृष्ट हुने एउटा स्क्रिप्टमा लघु फिल्म निर्माणको लागि यस प्रतिष्ठानले रु. एक लाख नगद प्रदान समेत संयोजक पाठकले बताए । यसरि निर्माण भएको फिल्मलाई नेपाल अन्तराष्ट्रिय फिल्म महोत्सव (निफ)को तेश्रो संस्करणमा सहभागी गराइनेछ ।
मायावतीको बायोपिकमा विद्या
अभिनयमा सन्यास लिएपछि के गर्छन् आमिर ?
‘छमाया छपक्कै’ मा जितुको यस्तो लुक्स
डेब्यु गर्ल मलिका भन्छिन् ‘छायाँकनकै क्रममा यात्रा गरे’